कि न्याय देऊ नत्र हामीलाई पनि गोली ठोकःदुर्गा देवी
काठमाडौं । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरीकी निर्मला पन्तकी आमा दुर्गादेबीले छोरीको हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्ने भए आफूलाई गोलीहान्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। निर्मलाको हत्या भएको ४५ दिनसम्म पनि दोषी पत्ता नलागेपछि न्याय माग्न काठमाडौं पुगेकी दुर्गादेवीले आँसु झार्दै भनिन्‘ अहिलेसम्म सबैले आशा
सरकारले निर्मला हत्या छानबिन समितिको म्याद १५ दिन थपेपछि सदस्य केसीद्वारा राजीनामा
काठमाडौं/निर्मला पन्त हत्याको अनुसन्धानका लागि गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिका सदस्य वीरेन्द्र बहादुर केसीले राजीनामा दिएका छन् । प्रदेश ७ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव रहेका केसीले सोमबार रिपोटर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएको जानकारी दिए ।
वप्तिस्मा दिन तलाउमा पसेका पाष्टरको गोहीले टोकेर मृत्यु
दक्षिण ईथियोपियामा गोहीले टोकेर एक जना प्रोटेस्टेन्ट पाष्टरको मृत्यु भएको छ । डोचो ईस्टे नाम गरेका ती पाष्टर ८० जना ईथियोपियनलाई सामुहिक बप्तिस्मा दिन तलाउमा पसेका थिए । उनले वप्तिस्मा गराईरहेको बेला गोहीले आक्रमण गरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । गोहीले उनको खुट्टा, पिठ्यु र हातमा टोकेको थियो
काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ क्षेत्रमा सुरु गरेको अनधिकृत निर्माण कार्यको विरोध भएको छ । विहीबार पशुपति विकास कोषको कार्यालयमै पुगेर आरोहणका सदस्यहरूले विरोध जनाएका छन् । केही समय अघिदेखि पशुपतिनाथ क्षेत्रमा पार्क बनाउने नाममा विकास कोषले सिमेन्ट प्रयोग गरेर जथाभावी रुपमा सडक,
काठमाडौंमा मनाइने गौराको मौलिकतामा कमी छैनः अम्बादत्त भट्ट,अध्यक्ष प्रशंसा समूह
अम्बादत्त भट्ट प्रशंसा संरक्षण समूहका संस्थापक एवम् वर्तमान अध्यक्ष हुन् । २०५५ सालमा स्थापित प्रशंसा समूहले राजधानी काठमाडौंमा हरेक वर्ष गौरा पर्वको आयोजना गर्दै आएको छ । सुदूर तथा मध्यपश्चिमका मौलिक पर्व गौराको साँस्कृतिक एवम् ऐतिहासिक महत्व छ । दुई दशकदेखि काठमाडौँमा गौरा पर्व आयोजना गर्दै प्रशंसा
कृष्णाष्टमी देशभर धुमधामसँग मनाइँदै
काठमाडौँ । भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिन मनाइने ‘श्री कृष्णजन्माष्टमी’ आइतबार देशभर भगवान् श्रीकृष्णको पूजा–आराधना गरी मनाइँदैछ । द्वापर युगमा पिता वासुदेव र माता देवकीको कोखबाट भगवान् विष्णुको अवतारको रूपमा श्रीकृष्णको जन्म भएको मानिन्छ । भगवान कृष्णको लीला र महिमा अपार रहेको धार्मिक विश्वास
द्वन्द्व पीडित भन्छन्,‘कंकाल मात्र भेटिएपनि चित्त बुझ्थ्यो’
दिपेन्द्र शर्मा/सुर्खेत । तत्कालीन माओवादी सशस्त्र जनयुद्ध सकिएको पनि एक दशक पूरा भएको छ । तर, त्यतिबेला राज्य र द्वन्द्वरत पक्षबाट बेपत्ता नागरिकको अहिलेसम्म खोजबिन हुन सकेको छैन् । बेपत्ता परिवारको गुनासो छ, कि लाश कि सास खोजी दिनु पर्यो भनेको पनि यतिका वर्ष भयो, कसैले हाम्रा दुःख सुनेन् । २०५६
नीलम कार्कीको योगमाया उपन्यासलाई मदन पुरस्कार
काठमाडौं । यस वर्षकोे मदन पुरस्कार उपन्यासकार नीलम कार्की ‘‘निहारिका’को उपन्यास ‘योगमाया’ लाई प्रदान गरिने भएको छ । मदन पुरस्कार गुठीको सोमबारको बैठकले योगमाया कृतिका लागि निारिकालाई मदन पुरस्कार दिने निर्णय गरेको हो । यस अघि चिर हरण उपन्यास लेखेर चर्चा पाएकी नीलमको योगमायाले पनि उत्तिक्कै
कञ्चनपुरमा कर्फ्यु जनजीवन प्रभावित
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको भीमदत्तनगर नगरपालिकामा बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म स्थानीय प्रशासनले फेरि कर्फ्यु लगाएको छ । कर्फ्युबाट महेन्द्रनगर बजार क्षेत्र बजार सुनसान छ । रक्षा बन्धनका दिन निकै चहलपहल हुने बजार सुनसान रहेको छ । स्थानीय रमेशदत्त जोशीले भने,‘अरू वर्ष बजारमा निकै चहलपहल हुन्थ्यो राखी बाध्नेको
असोजमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं नआउने
काठमाडौं । उपत्यकावासीको प्यास मेटाउन मेलम्चीको पानी ल्याउन निर्माण भइरहेको सुरुङको काम सम्पन्न गर्न अझै केही समय लाग्ने भएको छ । इटालीको निर्माण कम्पनी को–ओपरेटिभ मुराटोरी सेमेन्टिस्टी दि रभेन्नासँग थप भएको समय असोजसम्म काम नसकिने भएपछि दशैँअघि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ नआउने निश्चित भएको हो । चैतमा
पर्यटन पत्रकार संघ हुम्लाको कोषाध्यक्षमा अमरवाणी संवाददाता बोहरा चयन
हुम्ला । पर्यटन पत्रकार संघ हुम्लाको कोषाध्यक्षमा अमरवाणी संवाददाता दाने बोहरा चयन भएका छन् । पर्यटन पत्रकार संघको हुम्ला भेलाले बोहरालाई सर्वसम्मतिले कोषाध्यक्षमा चयन गरेको हो । संघको नयाँ कार्य समितिको अध्यक्षमा रमेश ऐडी, उपाध्यक्षमा भक्तराज ऐडी, महिला उपाध्यक्षमा तिलसरा विक, सचिवमा मिमसिंह नेपाली
यस्तो छ नागको महिमा
काठमाडौँ । आज देशभर नागपञ्चमी मनाईएको छ । साउन शुक्लपक्षको पञ्चमीका दिन मनाईने यस पर्वमा पृथ्वीमा आएका नागहरू आजकै दिनबाट नागलोक फर्किन्छन् भन्ने जनविश्वास रहेको छ । आचार्य घनश्याम लेखक भन्छन्, ‘नागहरु पृथ्वीमा आउँदा गर्मी बढेको तथा बर्षा ऋतु सुरु भएको संकेत हो भने नाग पञ्चमीबाट गर्मी घटेको र बर्षा
हेलिकप्टरको पुच्छरले काटेर भारतीय नागरिकको मृत्यु
दाने बोहरा/हुम्ला हिल्सा अवतरणको क्रममा एक जना भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको छ । मनाङ एयरको हेलिकप्टरमा नगेन्द्र कुमार कार्तिक मेहेता सिमकोट हुँदै हुम्लाको उत्तरी भेग हिल्सा पुगेका थिए । हेलिकप्टरबाट ओर्लिने क्रममा पछाडिको पखेटाले काटेर उनको मृत्यु भएको हो । मानसरोवर कैलाश तीर्थयात्राका लागि उनी
ठेकेदारको लापरवाहीले हुम्लाका ११ पुलको निर्माण कार्य ठप्प
दाने बोहरा/हुम्ला । ठेकेदारको लापरवाहीको कारण हुम्लाका ११ ओटा झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । समयमै निर्माण सामग्री ढुवानी नगर्दा निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो । टर्सी कार्गाे ढुवानी सेवाका सोनाम लामाले ०७२ सालमा ४ ओटा झोलुङ्गे पुल मुचु, बुराउसे घाटेखोला, ठाडोखोला ठेहे र सिक्पाखोलाको
रहेनन् प्रसिद्ध रेडियोकर्मी यज्ञनीधि दाहाल
काठमाडौँ । लामो समयदेखि किड्नीको रोगबाट ग्रस्त प्रसिध्द रेडियोकर्मी तथा साहित्यकार यज्ञनीधि दाहालको निधन भएको छ । दाहाल वि.सं. २०१० मा खोटाङमा जन्मेका थिए । विहिबार विहानको खाना खाएपछि उनी घरमै अचानक लडेर बेहोश भएका थिए । सुरुमा अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा आईसीयुमा राखेर उनको उपचार गरिँदै थियो
बाल विवाह रोक्न सबैको हातेमालो जरूरी
काठमाडौँ । मुलुकमा बढ्दो बालविवाह रोक्न सबैको हातेमालो जरूरी रहेको बताइएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । उनीहरूले बाल विवाह रोक्न सबै तहतप्काको सहयोग आवश्यक हुने औंल्याए । सो अवसरमा आयोजक संस्थाले
खोई हामीलाई गरिब परिचय पत्र ?
दाने बोहरा/हुम्ला, हुम्लाका सात गाउँपालिकामा शुरू गरेको गरिब घर परिचय पत्र हुनेखानेलाई वितरण गरेको पाइएको छ । तत्काली जिल्ला विकास समितिले गरिब घर परिवारको तथ्याङ्क संकलन गर्दा वास्तविक गरिब छुट्न गएकाले समस्या आएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । ‘जिल्लामा गरिब घर परिचय पत्र वितरणमा गरिब
हुम्लाको विकट गाउँपालिकामा ईन्टरनेट सेवा
दाने बोहरा/हुम्ला, कर्णाली प्रदेशको दुर्गम हुम्लाको ताजकोट गाउँपालिकाले ईन्टरनेट सेवा सुचारु गरेको छ । गाउँपालिका कार्यालयले पहिलोपटक ईन्टरनेट जडान गरेर गाउँलाई प्रविधिसँग जोडेको छ । गाउँपालिकाको बजेटबाट ईन्टरनेट सेवा जडान गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष बागदल मल्लले अमरवाणीलाई जानकारी गराए । उनले
बसाइँ सरी आउनेलाई पाँच लाखसम्म अनुदान दिने गाउँपालिका
तेह्रथुम । तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले आफ्नो जनसंख्या बढाउन बसाइँ सरी आउनेलाई अनुदान दिने नीति लिएको छ। गाउँपालिका क्षेत्रमा बसाइँ सरी आएर व्यवसाय गर्नेलाई उनीहरूको व्यावसायिक योजनाका आधारमा पाँच लाख रूपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने भएको हो। ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सुविधाको अभाव भन्दै सर्वसाधारणको
टिकापुरमा अर्की १३ वर्षीया बालिका बलात्कृत
टीकापुर । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटना सेलाउन नपाउँदै कैलालीको लम्कीचुहामा अर्की १३ वर्षीया बालिका बलात्कृत भएकी छन् । लम्की–चुहा नगरपालिका–३ चिसापानीमा १३ वर्षीया बालिका छिमेकीबाट बलात्कृत भएको प्रहरी कार्यालयमा उजूरी दर्ता भएको छ । मोतिपुर इलाका प्रहरी
उमेर २७ वर्ष । पातलो ज्यान; होचो कद । मीठो बोली । उनी भेट्ने जति सबैसँग मधुर स्वरमा सम्मानपूर्वक बोल्छन्; व्यवहार गर्छन् । प्रायँ साँझ गस्तीमा निस्किन्छन्; आफैँ सवारी हाँकेर–चुडामणी पुन । सीमा क्षेत्रका समस्याबारे उनी भन्छन्, ‘नेपाल भारत खुला सीमाना छ । तस्करी, राजश्व छली, चोरी निकासीका समस्या त छँदै
१५ दिने सुत्केरी महिलाको मृत्यु
दाने बोहरा/हुम्ला, कर्णाली प्रदेश दुर्गम जिल्ला हुम्लामा एक सुत्केरी आमाको ज्यान गएको छ । जिल्लाको सकेगार्ढ गाउँपालिका–७ रोडीकोटीका हाँसे विककी ४२ बर्षिया श्रीमती तारा विकको ज्यान गएको हो । शुक्रबार राती ४ बजे आफ्नै घरमा उनको अचानक मृत्यु भएको ज्ञानसिह विकले बताए । सुत्केरी भएको १५ दिन बितेपनि
गर्भवती बाख्रा बलात्कार !
सुन्दै अपत्यारिलो लाग्ने बाख्राको सामूहिक वलात्कार । त्यो पनि गर्भवती । तर, भारतको हरियाणामा भएको उक्त कुकृत्य घटनाका विवरणले त्यसको सत्यता पुष्टि गर्छ । सामाजिक सञ्जालदेखि चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले घटनाबारे समाचार दिइरहेका छन् । घटना हरियाणा राज्यको मेवाट जिल्लाको एउटा गाउँको हो
‘ओली सरकारले न्यायालयलाई नियन्त्रणमा राख्न खोज्यो’
काठमाडौं । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन्,‘समितिले आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । समिति सार्वभौम छ । प्रस्तावित नाम मान्ने वा नमान्ने अधिकार समितिलाई छ । तर पछिल्लो समय समितिको नियतमाथि गम्भिर रुपमा प्रश्न उठेको छ ।’ सुनुवाई समितिले अहिले
हिरण्यकुमारीको नविनतम कथा कृति "अग्नीदह" को लोकार्पण
काठमाडौं,अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) नेपाल च्याप्टरको आयोजनामा अनेसास नेपालका सल्लाहकार एवं गुञ्जनका अध्यक्ष वरिष्ठ कथाकार हिरण्यकुमारी पाठकको नविनतम कथाकृति "अग्नीदह" को लोकार्पण गरिएको छ । आइतबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गङगाप्रसाद उप्रेतीको प्रमुख आतिथ्यता र
किशोरी बलात्कारबारे जानकारी दिन सभामुखको सरकारलाई निर्देश
काठमाडौं । सभामुख कृष्णबहादुर महराले कञ्चनपुरमा किशोरी बलात्कारका विषयमा सदनलाई जानकारी दिन सरकारलाई निर्देश दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइबारको बैठकमा शून्य र विशेष समयमा सांसदले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–३ की १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको र शव उखुबारीमा फालिएको भन्दै
अनिच्छित गर्भबाट जन्मिएकी अपांग महिला: जो गाउँपालिकाको नीति बनाउँछिन्
उनी जन्मदा परिवारका कुनै पनि सदस्य खुसि भएनन् । जन्मदै सानो आकारकी । अझ हुर्कदै गएपछि परिवारमा अर्काे निराशा थपियो, उनी सामान्य बच्चाहरु जस्तो बढिनन् । उनी त होचिपुड्की पो भइन् । उनलाई परिवारले बोझको रुपमा लिन लाग्यो । त्यो परिवारलाई के थाहा परिवारले बोझ ठानेकी तिनै होची पुड्की सिङ्गो गाउँपालिकाको नीति
क्यान्सरको कारक सुर्तीजन्य पदार्थ त्याग्न युवा वर्गलाई अनुरोध
काठमाडौं । क्यान्सर काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष रुद्रलाल कडरियाले युवा/युवतीमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढ्नु घातक भएको बताएका छन् । एसियन पब्लिक स्कूल अनामनगरले आयोजना गरेको जनचेतनामूलक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कडरियाले क्यान्सर रोगको कारक सुर्तीजन्य पदार्थबाट युवा वर्गलाई जोगाउन अभिभावक
सरस्वती ढुङ्गाना/काठमाडौं । हातभरी हरियो र पहेंलो चुरा, हरियै लुगा अनि हातभरी मेहन्दी लगाएर प्रफुल्ल छिन् चावहिल निवासी लक्ष्मी उप्रती । ४० वर्षिय लक्ष्मीका श्रीमान् विदेशमा छन् । ‘मलाई सानैदेखि हरियो रङ असाध्यै मनपर्छ, साउन महिनालाई भगवान शिवको महिना पनि भन्छन् त्यसलै साउन १ गतेबाट नै आफ्नो ‘लुक’
जाजरकोटमा पहिरोमा पुरिएर हजुबा र नातिनीको मृत्यु
जाजरकोट । अविरल वर्षाले आएको पहिरोले घर पुर्दा जुनीचाँदे गाउँपालिका–६ गर्खाकोट छिर्कमा एकै परिवारका २ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ घाइते भएका छन् । घरमा सुतिरहेका बेला आएको पहिरामा परेर ५५ वर्षीया लली बुढा र नातिनी नौ वर्षीया सिर्जना बुढाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ । घटनाम भक्तबहादुरकै